Shiinaha Yaskawa robot alxanka warshad MOTOMAN-SP165 iyo saarayaasha | Jiesheng
Ku Yaskawa robot alxanka MOTOMAN-SP165 waa aalado badan oo shaqeynaya oo u dhigma qoryaha alxanka yar iyo kuwa dhexe. Waa nooc 6-dhidib ah oo isku-dhafan oo isku-dhafan, oo leh culeyska ugu badan ee 165Kg iyo ugu badnaan 2702mm. Waxay ku habboon tahay kabadhada xakamaynta YRC1000 waxayna u isticmaashaa alxanka iyo gaadiidka.
Spot Alxanka Robot Sharax
Ku MOTOMAN-SP taxane ah Yaskawa robots alxanka kaalinta waxay ku qalabaysan yihiin nidaam robot horumarsan si caqli ahaan loogu xaliyo dhibaatooyinka goobta wax soo saarka ee macaamiisha. Jaangoynta qalabka, hagaajinta waxtarka rakibidda, hawlgalka, iyo dayactirka, yaree tillaabooyinka hawlgalka ee dejinta qalabka iyo dayactirka, iyo hagaajinta waxtarka hawlgalka.
Ku Yaskawa robot alxanka MOTOMAN-SP165 waa aalado badan oo shaqeynaya oo u dhigma qoryaha alxanka yar iyo kuwa dhexe. Waa a6-dhidib taagan oo isku-dhafan oo isku-dhafan nooca, oo xamuulkiisu yahay ugu badnaan 165Kg iyo ugu badnaan 2702mm. Waxay ku habboon tahay kabadhada xakamaynta YRC1000 waxayna u isticmaashaa alxanka iyo gaadiidka.
1760Kg 5.0kVA 125 ° / seken 115 ° / seken
125 ° / seken 182 ° / seken 175 ° / seken 265 ° / seken
Robotka alxanka barta MOTOMAN-SP165 wuxuu ka kooban yahay jirka aaladaha, nidaamka xakamaynta kumbuyuutarka, sanduuqa waxbaridda iyo nidaamka alxanka barta. Faragelinta yaraatay ee udhaxeysa qalabka durugsan iyo fiilooyinka dartiis, jilitaanka internetka iyo howlaha waxbariddu way fududaan. Nooca gacanta godan ee leh fiilooyinka la dhisay ee alxanka barta ayaa yareynaya tirada fiilooyinka u dhexeeya robotka iyo kontroolka xakamaynta, wuxuu hagaajiyaa joogtaynta iyadoo la siinayo qalab fudud, hubinta heerka hawlgalka hoose, oo ku habboon qaabeynta cufnaanta sare, iyo hagaajinta xawaaraha sare hawlgallada. Ku biir wax soo saarka.
Si loola jaanqaado shuruudaha shaqada ee dhaqdhaqaaqa rogrogmi kara, robotyada alxanka barta ayaa sida caadiga ah doorta naqshadda aasaasiga ah ee aaladaha warshadaha ee farshaxanimada leh, kuwaasoo guud ahaan leh lix darajo oo xorriyad ah: wareegga dhexda, wareegga cududda weyn, wareegga hore ee gacanta, wareegga curcurka, curcurka iyo curcurka maroojin Waxaa jira laba nooc oo wadista gawaarida ah: wadista hawo-biyoodka iyo korontada. Dhexdooda, wadista korontada waxay leedahay faa'iidooyinka dayactirka fudud, isticmaalka tamarta yar, xawaaraha sare, saxsanaanta sare, iyo nabadgelyada wanaagsan, sidaa darteed si ballaaran ayaa loo isticmaalaa.
Hore: Yaskawa aaladda alxanka qallalan AR2010
Xiga: Yaskawa Spot Alxanka Robot SP210
Yaskawa Qabashada Robot Motoman-Gp12
Yaskawa Lix-dhidibka Qabashada Robot Gp20hl
Yaskawa Qabashada Robot Motoman-Gp25
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, 6 Axis Qabashada Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Qabashada Gacanta Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka,